4 Nina makhosi, qhubekani ninika izinceku+ zenu okulungile nokufaneleyo, nazi ukuthi nani nineNkosi ezulwini.+ 2 Phikelelani emthandazweni,+ nihlale niwuphaphamele ngokubonga,+ 3 ngesikhathi esifanayo nisithandazela+ nathi, ukuba uNkulunkulu asivulele umnyango+ wokukhuluma, ukuze sikhulume imfihlo engcwele+ mayelana noKristu, eqinisweni engisetilongweni+ ngenxa yayo; 4 ukuze ngiyenze ibonakale njengoba kufanele ngikhulume.+ 5 Qhubekani nihamba ngokuhlakanipha ngakulabo abangaphandle,+ nizithengela ithuba.+ 6 Amazwi enu ngaso sonke isikhathi mawabe nomusa,+ ayoliswe ngosawoti,+ ukuze nazi ukuthi kufanele nimphendule+ kanjani umuntu ngamunye. 7 Zonke izindaba zami uThikhiku,+ umfowethu othandekayo nesikhonzi esithembekile nenceku ekanye nathi eNkosini, uzonazisa zona. 8 Ukuze nazi ngezinto eziphathelene nathi nokuba aduduze izinhliziyo zenu,+ ngimthumela kini 9 kanye no-Onesimu,+ umfowethu othembekile nothandekayo, ophuma phakathi kwenu. Bazonazisa zonke izinto ezilapha. 10 U-Aristarku+ isiboshwa esikanye nami uyakhonza kini, kanjalo noMarku+ umzala kaBarnaba, (enamukela imiyalo ngokuphathelene naye ukuba nimamukele+ uma kwenzeka efika kini,) 11 kanye noJesu obizwa ngokuthi uJustu, laba bengabanye babasokile. Yilaba kuphela abayizisebenzi ezikanye nami ngenxa yombuso kaNkulunkulu, futhi bona kanye laba babe usizo oluqinisayo kimi. 12 U-Ephafra,+ ophuma phakathi kwenu, inceku kaKristu Jesu, uyakhonza kini, ezikhandla ngaso sonke isikhathi ngenxa yenu emithandazweni yakhe, ukuze ekugcineni nime niphelele+ futhi niqiniseka ngayo yonke intando kaNkulunkulu. 13 Ngempela ngiyamfakazela ukuthi wenza umzamo omkhulu ngenxa yenu nalabo abaseLawodikeya+ nalabo abaseHiyerapholi. 14 Uyakhonza kini uLuka+ udokotela othandekayo, noDema+ ngokufanayo. 15 Ningikhonzele kubazalwane eLawodikeya nakuNimfa nasebandleni elisendlini yakhe.+ 16 Lapho le ncwadi isifundiwe kini, hlelani ukuba ifundwe+ nasebandleni labaseLawodikeya nokuba nani nifunde leyo evela eLawodikeya. 17 Futhi, tshelani u-Arkiphu+ nithi: “Qhubeka uqaphela inkonzo owayamukela eNkosini, ukuba uyifeze.” 18 Nanku umkhonzo wami, okaPawulu, ngesandla+ sami uqobo. Qhubekani nikhumbula ukuboshwa+ kwami. Umusa ongafanelwe ube nani.